कांग्रेसमा विवादः चुनावी हारको जिम्मा कसले लिने ? ::Nepali TV
You are here : Home News कांग्रेसमा विवादः चुनावी हारको जिम्मा कसले लिने ?
काठमाडौं । विहान ९ बजेका लागि बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन । महामन्त्री शशांक कोइरालाले चुनावी समिक्षा र आगामी कार्यक्रमसहित लिखित प्रस्ताव पेश गर्ने र सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलेर चुनावी समिक्षा बैठक सक्ने तयारी छ ।